Kutheni kufuneka ukhusele iwebhusayithi yakho ngesitifiketi se-SSL kwa-Semalt
Ngaba ucinga ngazo zonke iindlela onokukhulisa ixabiso le-SEO kwiwebhusayithi yakho? Ngelixa siqinisekile ukuba ubambe zonke iziqhamo ezixhonyiweyo ezisezantsi, kukho into enye ehlala iphambuka. Kwaye leyo yinkcazelo yedatha yewebhu.
Ngamanye amagama, ukufakwa kwesatifikethi se-SSL kwiwebhusayithi yakho ekhuthaza unxibelelwano olukhuselekileyo, olufihliweyo kubasebenzisi bakho kunye nedatha yabo. NgoSemalt, unokuqinisekisa ukuba lonke unxibelelwano kwiwebhusayithi yakho lufihliwe kwaye lukhuselekile. Izatifikethi zethu ze-SSL ezingabizi kakhulu zisetyenziswa kakhulu kuzo zonke iiwebhusayithi ezenza ukuba zikhuseleke ngakumbi, zinomdla kuGoogle, kwaye zithandwe.
Ukuba ne-encryption eqinile ye-HTTPS kunokuba yindlela enkulu yokuthatha inqanaba le-webhusayithi ye-SEO yakho ingabi nanto iphakamileyo emehlweni eenjini zokukhangela. Ngokukodwa kunjalo ukuba iwebhusayithi yakho ijongana neentlawulo (umzekelo: inqwelo yokuthenga).
Makhe siqwalasele ngokunzulu ukuba kutheni i-SSL iyinto ebalulekileyo kwi-SEO ngo-2020 nangaphaya.
Yintoni iSiqinisekiso se-SSL?
Ngaphambi kokuba singene kwimingcelele, masiqale siqonde ukuba yintoni isatifikethi se-SSL. Ukuba umtsha kwiiwebhusayithi, umbuzo osisiseko ungaphezulu: yintoni i-encryption yewebhusayithi? Okanye, lithetha ntoni i-HTTPS?
Impendulo ilula. I-SSL, emele ukuSebenzisa iiSoketshi eziKhuselekileyo, ngumgaqo-nkqubo wokhuseleko we-intanethi ovumela ukubethelwa kwedatha, ukuqinisekiswa, kunye nokunyaniseka kwedatha kwiiwebhusayithi zanamhlanje. Iguqula iprotocol yokudluliselwa kwengqondo eqhelekileyo (HTTP) ibe yindawo ekhuselekileyo (HTTPS), inika ukhuseleko kwidatha yakho nasekuthembekeni kwabasebenzisi bakho. Nawuphi na umbandela wolwazi ohamba neseva yewebhu yakho uxhonyiwe ukuze ungabiwa okanye uphazamiswe ngexesha lokuhambisa.
I-SSL ingafakwa kwiwebhusayithi njengesatifikethi (okuyindibaniselwano yeekhowudi) ezenziwe ngumboneleli onje ngeSemalt. Esi siqinisekiso se-SSL sifiqa yonke idatha engena kunye newebhusayithi yakho. Ikwenza oku ikakhulu ngezenzo ezithathu:
Ukubhala yonke idatha
Ukuqala inkqubo yokungqinisisa phakathi kwezixhobo (ikhompyuter yakho kunye neseva) ukuqinisekisa ukuba ezi zixhobo zizinto abathi ziyile
Ngombhalo osayiniweyo wedatha yokuchonga okungcono kwiziphelo zombini.
Kukhuseleko lwe-Intanethi, igama lobuchwephesha le-SSL yi-TLS, emele ukhuseleko loLwakhiwo Ngumlandeli we-protocol ye-SSL ye-3.0 eyasungulwa ngo-1996. Namhlanje, yaziwa ngokuba yi-SSL / TSL encryption. UGoogle uyathanda ukuyibiza ngokuba yi-HTTP ngaphezulu kwe-TLS okanye i-HTTPS.
Umzekelo, xa umsebenzisi etyelela iwebhusayithi yakho kwaye engenisa ulwazi lwekhadi lakho letyala kwiphepha lokuphuma, loo datha ifanele ukubethelwa ngokufihlakeleyo. Isatifikethi se-SSL, unokuqinisekisa ukuba kunjalo. Oku kukhusela ulwazi lwakho lobuqu lomsebenzisi kunye neeprojekthi zewebhusayithi yakho ukuba zithembeke. Ukwenza abasebenzisi bakho babuye kwaye batshintshe kwakhona kwixesha elizayo.
Esi satifikethi se-SSL sikwanika isimboli yesitshixo eluhlaza ekuqaleni kwe-URL kwiGoogle Chrome kunye neMozilla Firefox. Ukususela oko saqala, uSemalt usebenze kumakhulu abathengi kwihlabathi liphela. Bonke abathengi bethu baxhomekeke kwesinye sezicwangciso ezintathu zesatifikethi se-SSL esinikezela zona. Iphakheji yeNkulumbuso (ekwaxhasa isiseko sangaphantsi) ngokwemvelo ngumthengisi wethu obalaseleyo phakathi kwe-SSL / i-TSL yesiqinisekiso.
Kuyasinceda ukuba abasebenzi abangamaSemalt bazi iilwimi ezininzi ezifana nesiNgesi, isiFrentshi, isiRashiya, isiUkraine, isiTaliyane, isiTurkey phakathi kwezinye. Oku kunceda kunxibelelwano olungcono kwaye kusinceda ukubonelela ngeenkonzo ezilungileyo kubasebenzisi bethu.
Umzobo 1-Isimboli esikhuselekileyo kwiGoogle Chrome
Ngoku ukuba unombono olungileyo wento enokuthi yenziwe ngokufihlakeleyo kwiwebhusayithi yakho kunye neendwendwe zakho zewebhu, makhe sijonge kuyo kwi-angle ye-SEO.
Kutheni iSatifikethi se-SSL sibalulekile kwi-SEO yeWebhusayithi yakho?
Ku-Semalt, ukuba ngumnikezeli weenkonzo ze-premium ze-SEO kunye ne-arhente yokuthengisa yedijithali egqibeleleyo, sijonga kakhulu iimveliso zokhuseleko. Isatifikethi sethu se-SSL sesinye sazo, ezinokukunceda ukonyusa i-SEO yewebhusayithi yakho.
Sele sifunde ukuba ubukho besatifikethi se-SSL / i-TSL kwiwebhusayithi yakho kunokuba yinto engummiselo kuwe. Ayizukukhusela iwebhusayithi yakho njengeziko elikhuselekileyo kuphela kodwa iya kukhusela ulwazi lwabasebenzisi bakho. Kodwa ngaphezulu koko, iya kunceda kwimizamo yenjini yakho yokukhangela (SEO) imizamo. Masifumanise ukuba njani.
I-Google Iyakhuthaza i-HTTPS
Ngo-2014, iGoogle ibhengeze ukuba izakuqala ukuthathela ingqalelo 'unxibelelwano olukhuselekileyo, olufihliweyo njengophawu kwindawo yalo yokukhangela kwi-algorithms'. Ngaphezulu kweminyaka emithandathu ukusukela ngelo xesha, uGoogle ukonyusele ubunzima bayo kwi-encryption ye-SSL / TSL kangangokuba namhlanje ichaphazela uninzi lwemibuzo yokukhangela, ngakumbi ezo zixhasayo kwintengiselwano yemali. Iziza ze-ecommerce, amasango okuhlawula, kunye nenethiwekhi yezentlalo yimizekelo yeentlobo zewebhusayithi ezifuna ukubethelwa. Oku kungenxa yokuba bajongana nolwazi lomntu siqu njengeenkcukacha zekhadi letyala, iinombolo zokhuseleko loluntu, kunye neenkcukacha zokuzazisa. Umzekelo, ukuba uneshishini lakho elilahlayo, i-SSL kufuneka ibe ngaphezulu koluhlu lwakho lokujonga lwe-SEO.
Ezinye iinjini zokukhangela ezifana neBing kunye neYandex nazo ziqalisile ukusebenzisa ukuguqulelwa kwewebhusayithi njengomqondiso oqhelekileyo wokuma okungcono.
NgokweNgxelo yokuTyhila ka-Google, iipesenti ezingama- 88 zamaphepha ewebhu kuGoogle Chrome kwihlabathi liphela (ngeWindows desktop) ngo-Epreli 2020 afakwa kwi-HTTPS ngo-Epreli. Eli linani elikhulu kuba i-Chrome isenolwabiwo oluphezulu (kunye nolona luphezulu) phakathi kwezikhangeli zewebhu.
Umzobo 2 - Ipesenti yamaphepha alayishwe ngaphezulu kwe-HTTPS kwi-Chrome
Ingxelo enye icebisa ukuba izixhobo zefowuni zihlala zisebenza ngenxa yesithuthi esingabhaliswanga. Oku kubonisa ukuba kukho indawo eyaneleyo yokuphucula iiwebhusayithi ezingqongileyo. Ngaba ungomnye wazo?
Ngokuphathelene noku, nazi izikhombisi ezivela kuGoogle ukuba kutheni i-HTTPS ibalulekile:
Zikhuselwa kwii-evesdroppers nakwabaphangi
Thintela ukuhlaselwa kwe-cyber
Ukuphucula ukuthembeka kwedatha
Isebenza njengenkqubo yokhuseleko emileyo nokuba isoftware kunye nokhuseleko lwe-Hardware zisenokungakwaneli
Iwebhusayithi ene-SSL / TSL encryption signals enjini yokukhangela ukuba ithatha ulwazi lomsebenzisi kunye nokuthembeka kwedatha. Kunye nezinye izinto ezinje ngomxholo ofanelekileyo, umxholo wesilo, ukunxibelelana okungqongqo kwangaphakathi, kunye nokubuyela umva kwe-backlink, ukubethela kuye kwavela njengento ebalulekileyo yokuphuculwa kwe-SEO.
Njengoko sele uyazi, i-SEO imalunga nokuphucula ukubonakala kwewebhusayithi yakho kukhangelo lwezinto eziphilayo. Nge-encryption njengeyona nto ibalulekileyo, unokufaka nje isatifikethi se-SSL ngemali encinci kwaye uphume ngobuninzi bewebhusayithi engabhalwanga, i-non-HTTPS ngaphandle phaya.
Inokuyiphucula njani i-HTTPS i-SEO?
Ukuba ungumthengisi we-intanethi, sele uyazi ukuba akukho senzo sinempembelelo kwangoko kwi-SEO. Unokuphucula yonke imixholo yakho yewebhusayithi kunye nemephu nganye iphepha ngalinye kwigama elithile elifanelekileyo. Kwaye iinjini zokukhangela zisazakuthatha ixesha ukuphinda isalathiso, i-cache, kunye nokujonga amaphepha akho kwiwebhu ekumgangatho ofanelekileyo.
Kuyaziwa ukuba akukho nto inokukhulisa ngokomlingo ii-SEO zakho ngobusuku bonke. Kunjalo ke nangokusebenza kwe-HTTPS kwiwebhusayithi yakho. Akufanele ulindele ukuba iwebhusayithi yakho ibe nokuma okungcono kwiziphumo zophando lwe-injini ye-organic (i-SERP) ngokufaka nje isatifikethi se-SSL / TSL. Xa uninzi lwezenzo zakho zidibana ixesha elininzi, ungaqala ukuvuna izibonelelo zazo.
Umzobo 3-Ngale ndlela iwebhusayithi ye-non-HTTPS ijongeka kanjani kumsebenzisi
Umzekelo omkhulu oza kukunika umfanekiso ocacileyo yile: qwalasela iwebhusayithi ye-TSL evaliweyo ye-Semalt kunye newebhusayithi engabhaliswanga yomnye umntu okhuphisana naye. Ukuba ucinga isihloko esifanelekileyo sentengiso yedijithali, kwaye ezi webhusayithi zimbini zikhuphisana ngesikhundla esiphezulu, indawo kaSemalt iya kuba kwinqanaba eliphezulu. Ngoba?
Kuba uSemalt akagcini nje ngokuphucuka , umxholo ofanelekileyo malunga nesi sihloko osifunayo kodwa unesitifiketi se-SSL esifakiwe. Ngendlela, yenye yezinto eziza kusetyenziswa zienjini ukukhangela iziphumo ezahlukeneyo zombuzo.
Ukuba ufuna ukutsala yonke indawo yokumisa ekutyhaleni iwebhusayithi yakho phezulu kukhangelo lwezinto eziphilayo, ukufaka isatifikethi se-SSL / TSL sesinye sezona zenzo zilula. Konke okufunekayo kukuthenga isatifikethi kuxhomekeka kwimfuno yakho, kwaye ulungile.
Ungasifaka njani isatifikethi se-SSL nge-Semalt?
NgoSemalt, ukufaka isatifikethi se-SSL kwiwebhusayithi yakho kulula njengokuthenga kwi-Intanethi. Ungaya kwiphepha lethu lezatifikethi ze-SSL kwaye ukhethe kwesinye sezicwangciso ezintathu. Bazi:
Isisiseko-Ukufakwa kuphela, akukho siqinisekiso
Umgangatho - I-SSL evakalayo ukusuka kufakelo lweComodo nangaphezulu
I-premium-Eyona nto iyithengisayo ye-SSL yeKhadi le-Positive ngenkxaso yeziqendu nofakelo
Njengoko sele kukhankanyiwe apha ngasentla, isicwangciso sethu seNkulumbuso sithandwa phakathi kwabathengi bethu abakhoyo. Iyabanika ukuseta okungaxakekanga ukuze bajolise kwimisebenzi ebaluleke kakhulu njengesiqulatho sewebhu kunye nolawulo lwabasebenzisi.
Nje ukuba ukhethe isicwangciso esifanelekileyo, yenza ukuthenga ngokuthenga ngesango elikhuselekileyo nelikhuselekileyo. Nje ukuba uyithengile, unokuyidibanisa ngokulula iwebhusayithi yakho kunye nenkonzo yethu kwaye uyicime ikhuseleke iwebhusayithi yakho. Kwimeko apho ujongene nayo nayiphi na imiba ngexesha lesigaba sokuseta, ukukhathalela abathengi bethu kuya kukukhokela kwaye uphendule imibuzo yakho.
Izatifikethi ze-SSL / TSL ze-Semalt zinokubonelela ngezinto ezintlanu eziphambili kuhambo lwakho lokuthengisa zedijithali. Bazi:
Ukhuseleko oluphezulu lwewebhusayithi yakho
Isimboli ekhuselekileyo eluhlaza ekhuselekileyo kwiGoogle Chrome nakwezinye iibrawuza
Ukhuseleko lwabucala lwabasebenzisi bewebhusayithi yakho
Umthamo ophezulu weendwendwe zewebhu eziphilayo ezivela kwiinjini zokukhangela
Njengoko kuphawuliwe ngabathengi bethu bangaphambili kunye nabasele bekho, ukufaka izatifikethi ze-SSL kunokukunceda ukuba uguqule iwebhusayithi yakho ibe yiportal yabucala abasebenzisi bakho abanokuthenjwa kwaye bajongane nayo rhoqo.
Musa ukuvumela abathengi abanokubakho bajike kwiwebhusayithi yakho emva kokujonga uphawu 'olungakhuselekanga' kwiGoogle Chrome. Bangenise ngesatifikethi seSemalt SSL namhlanje. Cofa apha ukuba uthenge enye ngoku.